Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii ugu muunadda quruxsanaa ee jaaliyadaha Pacific-ga oo maanta u furmay – Sawiro cusub
Shirkii ugu muunadda quruxsanaa ee jaaliyadaha Pacific-ga oo maanta u furmay – Sawiro cusub
Posted by ONA Admin	/ April 20, 2014
Waxaa maanta ka furmay magaalda Perth ee wadanka Australia shirkii sideedaad ee Jaaliyadaha Ogaadeenya ee wadamada la isku yidhaahdo Pacifica. Shirkan oo ah mid sanad walba la qabto ayaa waxaa kasoo qayb galay wufuud aad u tiro badan oo ka kala timid gobolka New South Wales, gobolka Queensland, Gobolka Victoria iyo wadanka Newzealand.
Shirka waxaa marti ku ahaa wafti heersare ah oo uu ka mid ahaa G/ku Xigeenka JWXO Mudane Maxamed Ismaaciil Cumar, Ku Xigeenka Hogaanka Warfaafinta JWXO Xildhibaan Maxamed Cali, Xildhibaan Xikam Sheekh oo ah Gudoomiyaha Jaaliyadda Victoria, Xildhibaan Maxamed Ibraahim Mursal iyo wufuud kale oo ku wehelisay socdaalkooda. Dhanka kale waxaa ku sii sugnaa gobolka marti galinayay Afhayeenka JWXO Mudane Caddaani Sheekh Xasan Hiirmoogeiyo isku duwaha Jaaliyadaha Pacific Xildhibaan Aadan Dakhare.
Sidoo kale waxaa marti ku ahaa shirkan wakiilo ka socda Jaaliyadda Oromiya iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Galbeedka Australia.
Abbaarihii 4tii galabnimo oo uu shirku si rasmi ah uga furmay ayaa lagu bilaabay aaydaha Qur’aanka kariimka oo uu akhriyay Sheekh Cabdiqaadir iyadoo ay madasha soo buux dhaafiyeen dadweyne aad u tiro badan oo muddo dheer ka shin tirinayay dhicitaanka shirka. Waxaa aad u camiray goobta uu shirku ka dhacayay midabada uu ka kooban yahay calanka Ogaadeenya iyadoo la arkayay in dadka intiisa badan ay ku labisnaayeen dhar lagu xardhay calanka Ogaadeenya.
Shirkan oo aan noociisa oo kale uusan horay uga dhicin Galbeedka Australia ayaa waxaa lagu soo bandhigay wax qabadka Jaaliyadaha ka dhisan wadamada Pacifick-ga, xaaladda tabar-gabka ah ee uu ku sugan yahay gumaysigu iyo qorshayaasha Jaaliyadaha Pacifick-ga.
Xubnaha ururka Dhalinyarta iyo Ardada Ogaadeenya OYSU ayaa soo bandhigay suugaan halgameed aad loogu bogay iyadoo ay madasha ka qaadeen heeso cusub oo ay ugu tala galeen munaasabaddan.
Qiimayntii warbixinadii Jaaliyadha ayaa waxaa la isla qiray in ay sidii loogu talo galay ay u fuleen dhamaan qorshayaashii u yaalay Jaaliyadaha iyagoo sameeyay horukac aad u balaadhan.
Ugu dambayntii, kasoo qaybgalayaashii shirka iyo marti-sharaftii ku sugnaa madasha ay balanqaadeen sii wadida iyo kor u qaadidda halganka lagula jiro gumaysiga haysta wadanka iyo ka xoraynta ciidda hooyo ee Ogaadeenya.